घाँस बेचेरै हुन्छ लाखौ आम्दानी – Dainik Lumbini
घाँस बेचेरै हुन्छ लाखौ आम्दानी
कोरोना संक्रमणको समयमा समेत पाल्पा रामपुरका किसानहरूले उन्नत जातको घाँसको बीउ बेचेर लाखांै रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको समयमा किसानहरूको आम्दानी खुम्चिदै गइरहेको समयमा पाल्पा रामपुरका किसानहरूले भने घाँस बेचेर लाखौ रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । राम्रो आम्दानी भएपछि पाल्पा रामपुरका तीन सय किसानहरू अन्य खेती छोडेर घाँस खेतीमा लागेका छन् ।
अहिले रामपुर नगरपालिकाको पाँच वटा वडाहरूमा घाँस खेती हुँदै आएको छ । घाँसको बजार राम्रो भएकोले खेती गर्ने किसानको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । घाँस र बीउ दुबै बिक्री हुने भएकोले दोहोरो फाइदा लिन रामपुरका किसानहरू घाँस खेतीमा लागेका हुन् । रामपुर नगरपालिकाको वडा नंं. ४ देखि वडा नं. ८ सम्म घाँस खेती फैलिंदै गएको छ । अन्य सबै उत्पादन बाहिरबाट रामपुरमा भित्रिने गरेपनि घाँस भने रामपुर बाट तराई क्षेत्रमा बाहिरने गरेको छ । ठुला–ठुला गाईभैंसीको फर्मको लागी जोई घाँस निकै उपयुक्त र पोसिलो दुधिलो भएकोले यसको उत्पादन र माग दुबै बढेको हो । जोई घाँस काँचो संगै सुकेपछि पनि उपयुक्त रहेको किसानहरूले बताएका छन् ।
रामपुर नगरपालिका वडा नंं. ६ का किसान रामप्रसाद देवकोटाले गाईभंैसीलाई प्रशस्त खुवाएर बचेको घाँसको बीउ बिचेर एकलाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । देवकोटाले घरमा चार÷पाँच वटा गाईभैंसीलाई दिनहँु खुवाएर बचेको घाँसको बीउ उत्पादन गरी बिक्री गरेका हुन् । रामपुरकै जगन्नाथ कंडेलले घाँस बचेर कारोना संक्रमणको समय समेत एक लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । खेतबारीमा लगाएको घाँस र बीउ घर–घर बाटै बिक्री भएकोले पाल्पा रामपुरका किसानहरू घाँस खेतीमा लागेका हुन् । किसानहरूले उत्पादन गरेको घाँस तथा घाँसको बीउ सीताकुण्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था रामपुरले खरिद गरी बिक्री गर्दै आएको छ । रामपुर क्षेत्रमा खपत भएर बढी भएको घाँस र बीउ दुबै सहकारीले पोखरा, बुटवल कपिलवस्तु र नवलपरासीसम्म बिक्री गर्र्दै आएको छ । सहकारी किसानहरूसंग प्रति किलो ६० रुपैयाँमा खरिद गरी सहकारीले ढुवानीसहित ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको सहकारीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अर्यालले बताए । जोइ घाँस पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराई क्षेत्रमा बढी बिक्री हुने गरेको छ । गत वर्ष सहकारीले ४० लाख रुपैयाँको घाँसको बीउ बिक्री गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताए । रामपुरमा घाँसको उत्पादन दिनहँु बढ्दै गएको यस वर्ष सरकारले नै किसानहरूलाई प्रति किलो घाँसको बीउ ८० रुपैयाँ तोकेकोले उत्पादन बढ्ने अध्यक्ष अर्यालले बताए । सीमानाका भारतबाट जोई घाँसभन्दा सहकारीले बिक्री गरेको घाँसको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ सस्तो समेत रहेको उनले बताए ।रामपुरमा दश वर्षअघि किसान हुमनाथ अर्यालले व्यवसायिक रूपमा घाँस खेती सुरु गरेका हुन् । किसान अर्यालको सिको गर्दै अहिले रामपुरमा करीव ५० जना व्यवसायिक रूपमा अन्य दुई सय पचास जना गरी तीन सय जनाले घाँस खेती सुरु गरेको सहकारीले जनाएको छ ।
एमसीसीविरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन
औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान क्रियाशील गराउन माग
फजुल खर्चमा बजेटै बजेट